Axmed Madoobe oo booqasho ugu tagay Madaxweynihii hore Somalia Xasan Sheekh (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Sheekh Axmed Madoobe oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa xalay howga uu Muqdisho ka degan yahay ku booqday Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Axmed Madoobe ayaa kulan is wareysi la qaatay Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan si rasmi ah u wareejiiyay xilka Madaxweynaha kadib markii looga guuleestay doorasho ka dhacday Muqdisho.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa Xasan Sheekh Maxamuud uga mahad celiyay sida uu ugu dhiiraday isbadalkii dalka ka dhacay iyo in Dowladnimada Somaliya ay sii socoto iyo sida uu u aqbalay natiijada doorashadii looga guuleestay.
Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa dhankiidsa ugu baaqay Axmed Madoobe iyo Hogaamiyaasha kale in ay soo dhaweeyaan dowlada cusub lana shaqeeyaan si halkeeda uga sii socota horumarka dalka uu gaaray sanadihii ugu dambeeyay.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wali ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana la filayaa in maalinta berito uu ka qeyb galo xaflada caleemo saarka Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Farmaajo, waxaana la filayaa in uu dalka ka dhoofo uuna la midoobo qoysaskiisa oo degay dalka dibadiisa.
Daawo Sawirada: Donald Trump oo Sargaal caan ah u magacaabay la taliyihiisa Amaanka Qaranka